I-Spandex Latex yintsimbi ye-latex yefilimu, eyenziwe ngokuzimeleyo yinkampani yethu. Yamkela itekhnoloji ye-nano-edityanisiweyo. Inobuthathaka obuphezulu kuwo onke amacala omane, akukho lula ukuqhekeka, ayifunisi manzi, kwaye inomsebenzi wokubila kwezemidlalo kunye nokuqina. Ukuqina kwayo ...Funda ngokugqithisileyo »
Umenzi womthombo Iziko lemithombo mveliso kunye nokudibanisa urhwebo B2B Abenzi abomeleleyo, intsebenziswano yokubonelela ngokunqamleza umda, ukuthunyelwa kwehlabathi (iFedEx DHL UPS TNT ARAMEX) Ukwenza iipleyiti zekhompyuter, uyilo lwantlandlolo, ibhedi yokusika ikhompyuter, ukuhlolwa komgangatho weemveliso kunye nokuziswa, inkonzo yabathengi cen .. .Funda ngokugqithisileyo »
Inkampani yethu yinkampani yeshishini elinye lokumisa elidibanisa uphuhliso lwamalaphu, uyilo lwemveliso, imveliso kunye nentengiso. Imveliso ephambili isebenzisa uphando oluzimeleyo kunye nophuhliso lwamalaphu, afana ne-spandex latex (umphezulu weoyile / isipili ngaphezulu), usebenzisa i-warp knitted lining lining, ilaphu liyi-enviro ...Funda ngokugqithisileyo »
Malunga nenkampani yethu Inkampani yethu yinkampani enikezela ngenkonzo yokuma kwindawo enye edibanisa uphuhliso lwamalaphu, uyilo lwemveliso, imveliso kunye nentengiso. Imveliso ephambili isebenzisa uphando oluzimeleyo kunye nophuhliso lwamalaphu, afana ne-spandex latex (umphezulu weoyile / umphezulu umphezulu), usebenzisa w ...Funda ngokugqithisileyo »
Ixesha Post: Apr-23-2020
Okwangoku, ngenxa yokuqhambuka kwee-coronaviruses ezintsha e-China nakwilizwe jikelele, inkampani yethu ikhathazekile kakhulu yile. Ngokusekwe kwiminyaka yethu emininzi yamava kwimveliso yempahla yomzimba kunye neendidi ezahlukeneyo zesinxibo, sivule imigca emibini yemveliso yeesuti zokukhusela ezingenazintsholongwane kunye neemaski. Zethu ...Funda ngokugqithisileyo »
Emva kweminyaka engaphezu kweshumi yamava, siye ngokuzimeleyo yavelisa uguqulelo ekrelekrele ezikrelekrele kwinkqubo yokwenza ipleyiti CAD. Yisoftware yokwenza ingubo yokwenza icwecwe lekhompyuter, ukufaka iikhowudi kunye nokubekwa. Yinkqubo entsha ye-CAD yengubo entsha negcweleyo. Le nkqubo ilungele ngakumbi ...Funda ngokugqithisileyo »
Emva kwemizamo yethu eqhubekayo, umthamo wentengiso yeethpandex zethayithi zethu ezithunyelwa ngaphandle kwiimarike zaseYurophu naseMelika idlule kwi-US $ 1 yezigidi. Olu luphumeleleyo olutsha kwimbali yethu yokuthengisa. Siza kuqhubeka nokwandisa nokuphucula iimveliso zethu ukuze iimveliso zethu zithandwe ngakumbi. ...Funda ngokugqithisileyo »